Shadow and Bone (2021) Season 1 Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Original nameShadow and Bone
Created byEric Heisserer
StarringAmita Suman, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Jessie Mei Li, Kit Young
Synopsis of Shadow and Bone (2021) Season 1 Complete
IMDb Rating – 8.2/10ဒီနှဈအတှကျ မှျောစီးရီး ကောငျးကောငျးလေး ကွညျ့ခငျြနတေဲ့သူတှအေတှကျ Shadow and Bone က တကယျ ကနြေပျစမှောပါ။ ဒီဇာတျလမျးဟာ စိတျကူးယဉျနိုငျငံနဲ့ တိုငျးပွညျတှအေပျေါ အခွခေံပွီး တညျဆောကျထားပါတယျ။ ရကျဗျကာဆိုတဲ့ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ နိုငျငံကွီးတဈခုဟာ နိုငျငံအလယျမှာ ဘယျလိုမှ ဖကျြဆီးလို့မရတဲ့ အမှောငျတံတိုငျးကွီးနဲ့ ကာဆီးနပွေီး ကှဲပွားနပေါတယျ။ အရှဘေ့ကျနဲ့ အနောကျဘကျကို ခရီးသှားဖို့ အမှောငျတံတိုငျးကွီးကိုဖွတျဖို့ကလညျး အထဲက သတ်တဝါဆိုးကွီးတှကွေောငျ့ အန်တရယျမြားလှနျးပါတယျ။ တံတိုငျးကွီးကို ဘေးကပတျသှားတော့လညျး လမျးတှကေ ကွမျးတမျးပွီး ရနျသူတှေ ဝိုငျးနတောပါပဲ။
ဒီတော့ ဒီတံတိုငျးကိုသာ ဘေးကငျးကငျး ဖွတျကူးနနေိုငျသူက နိုငျငံရဲ့ အခမျြးသာဆုံးအဖွဈ လှယျလှယျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရကျဗျကာနိုငျငံက လူတှကေလညျး သာမနျတှမေဟုတျပါဘူး။ မှျောအစှမျးကိုယျစီရှိတယျသူတှလေညျး ပါပါတယျ။ မီး၊ရေ၊လေ၊အမှောငျကို ထိနျးနိုငျသူတှေ၊ လူကို ထိနျးခြုပျနိုငျသူတှေ စသညျဖွငျ့ မြိုးစုံရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့တှမှော မရှိသေးတာက နဖေနျဆငျးသူဆိုတဲ့ အလငျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျသူပါပဲ။ အဲဒီလို အစှမျးနဲ့သူတဈယောကျသာရှိရငျ အမှောငျတံတိုငျးကို ကောငျးကောငျးအံတုနိုငျပွီ ဖွဈပမေယျ့ နဖေနျဆငျးသူဆိုတာ ဒဏ်ဍာရီလိုပဲ ဖွဈနခေဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ ရကျဗျကာနိုငျငံရဲ့ မှျောအစှမျးမရှိတဲ့သူတှကေို စဈတပျအဖှဲ့ ဖှဲ့ထားပွီး တိုကျခိုကျရေးသမားတှေ၊ မွပေုံဆှဲသူတှေ စသညျဖွငျ့ တာဝနျပေးထားပါတယျ။ အဲဒီတပျကိုတော့ ပထမတပျဖှဲ့လို့ချေါပွီး မှျောဆရာတပျကိုတော့ ဒုတိယတပျလို့ ချေါပါတယျ။ ဒုတိယတပျဟာ ပထမတပျတှကေို ကွုံတိုငျး နှိမျတတျ အနိုငျကငျြ့တတျတာပါပဲ။ ဒီလိုနေ့ တဈနမှေ့ာတော့နဖေနျဆငျးသူ တဈယောကျရှိလာတယျဆိုတဲ့ သတငျးထှကျလာတဲ့အခါ….
IMDb Rating – 8.2/10ဒီနှစ်အတွက် မှော်စီးရီး ကောင်းကောင်းလေး ကြည့်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် Shadow and Bone က တကယ် ကျေနပ်စေမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ငံနဲ့ တိုင်းပြည်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ရက်ဗ်ကာဆိုတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဟာ နိုင်ငံအလယ်မှာ ဘယ်လိုမှ ဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့ အမှောင်တံတိုင်းကြီးနဲ့ ကာဆီးနေပြီး ကွဲပြားနေပါတယ်။ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်ကို ခရီးသွားဖို့ အမှောင်တံတိုင်းကြီးကိုဖြတ်ဖို့ကလည်း အထဲက သတ္တဝါဆိုးကြီးတွေကြောင့် အန္တရယ်များလွန်းပါတယ်။ တံတိုင်းကြီးကို ဘေးကပတ်သွားတော့လည်း လမ်းတွေက ကြမ်းတမ်းပြီး ရန်သူတွေ ဝိုင်းနေတာပါပဲ။
ဒီတော့ ဒီတံတိုင်းကိုသာ ဘေးကင်းကင်း ဖြတ်ကူးနေနိုင်သူက နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးအဖြစ် လွယ်လွယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်ဗ်ကာနိုင်ငံက လူတွေကလည်း သာမန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ မှော်အစွမ်းကိုယ်စီရှိတယ်သူတွေလည်း ပါပါတယ်။ မီး၊ရေ၊လေ၊အမှောင်ကို ထိန်းနိုင်သူတွေ၊ လူကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူတွေ စသည်ဖြင့် မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေမှာ မရှိသေးတာက နေဖန်ဆင်းသူဆိုတဲ့ အလင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူပါပဲ။ အဲဒီလို အစွမ်းနဲ့သူတစ်ယောက်သာရှိရင် အမှောင်တံတိုင်းကို ကောင်းကောင်းအံတုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် နေဖန်ဆင်းသူဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီလိုပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ရက်ဗ်ကာနိုင်ငံရဲ့ မှော်အစွမ်းမရှိတဲ့သူတွေကို စစ်တပ်အဖွဲ့ ဖွဲ့ထားပြီး တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ၊ မြေပုံဆွဲသူတွေ စသည်ဖြင့် တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီတပ်ကိုတော့ ပထမတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်ပြီး မှော်ဆရာတပ်ကိုတော့ ဒုတိယတပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယတပ်ဟာ ပထမတပ်တွေကို ကြုံတိုင်း နှိမ်တတ် အနိုင်ကျင့်တတ်တာပါပဲ။ ဒီလိုနေ့ တစ်နေ့မှာတော့နေဖန်ဆင်းသူ တစ်ယောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာတဲ့အခါ….
Quality – Web-dl 4K & 1080p
Episode5(1080p)
Episode5(4K)
Episode6(1080p)
Episode6(4K)
Episode7(1080p)
Episode7(4K)
Episode 8 (1080p)
Episode 8 (4K)
Production21 Laps Entertainment, Chronology, Loom Studios
Last air date2021-04-23
Home PageShadow and Bone (2021) Season 1 Complete